अर्को चुनाव हुन्छ भन्ने बिर्सियो क्यारे एमालेले ! « paniphoto
« ‘यत्रो पढेको साला ५ हजारको लागि हो ?’ सुन्दरी प्रतियोगितामा नारी र पशुहाटका पशुहरु »	अर्को चुनाव हुन्छ भन्ने बिर्सियो क्यारे एमालेले !
By -दिपध्वनी- on Tuesday May 08, 2012	कार्टुन साभार : नागरिक दैनिकसहमतिको सरकार बनाउँने भनेर हस्ताक्षर गरेको एमाले सरकारमा नजाने निर्णय सुनाउँदै छ । हुन त विगतदेखि नै एमालेले देखाउँदै आएको चरित्र हो यो । यसपाली पनि एमालेले सदा झै ढुलमुल पारा नै देखाएको हो कि अरु नै कुनै कारण छ ? संविधान निर्माण गर्नुपर्ने बेलामा सत्ताको बार्गेनिङ नमिलेर सरकारमा नजाने एमाले अब आउँने चुनावमा जनतासामू के भन्दै जाला ? के अर्को चुनाव हुन्छ र जनतासामू जानु पर्छ भन्ने नै बिर्सिएको हो एमालेले ? तपाईलाई के लाग्छ ? आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुहोस् । सबै मिलेर छलफल गरौं न । हुन्न !
राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासहित प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाले गरेको पाँच बुँदै सहमतिको विपरित एमालेले माओवादी र कांग्रेसले बिना छलफल मन्त्रीपरिषद गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँड गरेको आरोप लगाउँदै सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेर पुन: आफ्नो ढुलमुले चरित्रलाई उदागों पारेको छ । संविधान जारी गर्न बीस दिनको समय बाँकी रहदा उसले सरकार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर निरर्थक बखेडा झिक्नुले शान्ति र संविधान निर्माणप्रतिको गैरजिम्मेवारीपनालाई छताछुल्ल पारेको छ । सत्ता बाहिर रहदा पानी बिनाको माछा झै छट्पटाउँने एमाले आफै सिद्धान्तका ठुला कुरा गर्ने तर आफैले त्यसको धज्जी उडाउँने मामिलामा खप्पिस छ भन्ने तथ्य उसको विवादास्पद अतितले नै देखाउँछ । एमालेले आफुलाई ढुलमुले चरित्रको छैनौं भन्ने कुनै आधार नै छैन । हैन भने संविधान निर्माणसम्बन्धी गाँठो परेका जटिल मुद्दा सल्टाउँन छोडेर यो संगीन मोडमा उक्त पार्टीका अध्यक्षलाई जेठ १४ मा संविधान आउँदैन भन्दै हिड्न सुहाउँछ ? एमालेलाई संविधान पर्खेर आशातित नजरले बसेका जनताको अपेक्षा भन्दा कुर्सीको लालसा नै प्यारो लागेको छ । संविधानसभाको चुनावमा लज्जास्पद हार बेहोरेको एमालेले बिर्सनु हुदैन कि फेरि अर्को चुनाव पनि आउँछ । फेरि पनि उसले जनतासामू अनुहार देखाउँनु पर्छ । तर एमालेले बिर्सिए जस्तो छ, फेरि अर्को चुनाव पनि आउँछ भन्ने ।
अल्छि नगरी तल कमेन्टमा आफ्नो बिचार लेख्नुहोस् है । नयाँ विचार सुरु गर्न मन नभए कसैको कमेन्टमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ।
« ‘यत्रो पढेको साला ५ हजारको लागि हो ?’ सुन्दरी प्रतियोगितामा नारी र पशुहाटका पशुहरु »	5 comments to अर्को चुनाव हुन्छ भन्ने बिर्सियो क्यारे एमालेले !
· जवाफ दिनुहोस्	एसो झल्लु र कोहि कोहि ले त जितेका थिए, अब त त्यो पनि सकिने भो/ अब चुनाब हुने कुरा मात्रै हैन, जनताले हामीलाई हेरिरको हुन्छ भन्ने पनि बिर्सियो/ हामी पार्टी हौ क्लब हैन भन्ने पनि बिर्सियो/
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	pritam
· जवाफ दिनुहोस्	के कुरा गर्नु भाको. एमाले पनि पार्टी हो र ?
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	सदिक्षा लोहनी
· जवाफ दिनुहोस्	लेख एकदमै एक पक्षिय लाग्यो । यो लेखमा त संविधान बनाउँने सम्पुर्ण काम एमाले सरकारमा नगएर रोकिन्छ भने जस्तो पनि गरियो । तर वास्तविकता यस्तो होइन जब सम्म माओवादीबाट सत्ता कब्जाको कुरा आइरहन्छ तब सम्म एमालेले केही गर्न सक्दैन । वर्तमान स्थितीको आंकलन गरेर नै एमाले सत्तामा नगएको हो । जनताले विश्वास गरेबमोजिमको मन्त्री पद पनि पाउँनु पर्छ नि हैन । नत्र के को लोकतन्त्र !
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Bikash Niroula
· जवाफ दिनुहोस्	अझै सम्म यस्तो सोच्ने कार्यकर्ता पनि बाँकी रहेछन् भन्ने लाग्यो सदिक्षाजी तपाईको कमेन्ट पढेर / एमालेले नराम्रो राजनीतिक बेहोरा देखाएको बिरोध हो यो, एक पक्ष भन्ने हैन / नराम्रो कुराको बिरोधमा एक पक्ष हुनु नराम्रो पनि त हैन नि, कि कसो सदिक्षाजी ? तपाईजस्ता अन्धकार्यकर्ता हुँदासम्म एमालेको भलो भइरहन्छ, जति नै पतित भएपनि / नेताहरु जागिर जोगाइदिने तपाईजस्ता कार्यकर्ताको जय होस् /
· जवाफ दिनुहोस्	एमाले पनि बिस्तारै राजाबादी जस्तै बदरिदै छ जनता पनि दिक्क भएका छन्. कार्यकर्ताले किन कुरा नाबुझेकहोन ?
यही Category बाटहो प्रचण्ड कमरेड, एमाङ्ग्रेस एनजिओ नै हुन् तर तपाईहरु नि ?दण्ड-क्षमा कि अर्कै केहि ?जे भयो, तपाई हाम्रै कारणले भयो । नथाकौं ।ख्याती चाहिएन, नतिजा निस्कियोस्भोली खानका लागि अमेरिकी प्लेन पर्खेर बस्ने दिन नआओस्विल ओरेलीलाई खुला पत्र – सुदर्शन सुवेदी ‘त्यो नेपाली मान्छे’ मात्र होइनन्हामी फगत पिँधबिनाको लोटा !पढ्न, पढाउँन चै नपाउँने तर उत्तर चै दिनै पर्ने ?रेमिट्यान्सबाट लोभिने कि जोगिने !आधा नेपाललाई जेल बनाऔँ, सबैलाई थुनौँOnline Users6 Users Onlineसन्दर्भ सूचि	अलगधार